बिहान चाडै उठ्दा स्वस्थ, बुद्धिमान र धनी भइन्छ ? – korea pati
June 29, 2020 Korea patiLeaveaComment on बिहान चाडै उठ्दा स्वस्थ, बुद्धिमान र धनी भइन्छ ?
अंग्रेजीमा एउटा प्रशिद्ध भनाई छ, ‘अर्ली टु बेड एन्ड अर्ली टु राइज, मेक अ मेन हेल्दी, वेल्दी एन्ड वाइज ।’
यसको अर्थ हो जो व्यक्ति बिहान चाडै उठ्छन्, राती चाडै सुत्छन् उनीहरु स्वस्थ हुन्छन् । बुद्धिजीवि हुन्छन् । र, उनीहरु धनी पनि हुन्छन् ।
के सुत्ने र उठ्ने यस्तो तालिकाले वास्वतमै स्वस्थ्य, बुद्धि र धन प्राप्त हुन्छ ?इंल्यान्डमा बस्ने टिम पावेल बिहान चाडै उठ्न पटक्कै रुचाउँदैनन् । यद्यपि उनी सधै ६ बजेअघि उठ्छन् । उठेर जिम जान्छन् । त्यसपछि काममा जाने तयारी गर्छन् । बिहान ९ बजे काम सुरु हुनुअघि नै उनी अफिस पुगिसकेका हुन्छन् । उनी आफ्नो अफिसमा बनेको पार्कमा केहीबेर टहल्छन् ।
बिहिबारको दिन टिमको काम अरु चाडै सुरु हुन्छ । उनले ५ बजेर २० मिनेट जाँदा ओछ्यान छाडिसकेका हुन्छन् । यस दिन उनी आफ्नो काममा जानुअघि जर्मन भाषा पनि सिक्छन् ।टिम दैनिक आधा घण्टा भरपुर श्रम गर्छन् । वसेर आरमसाथ नास्ता गर्छन् । केही समय पार्कमा टहल्छन् । जर्मन भाषा सिक्छन् । यी सम्पूर्ण काम उनी अफिस जानुअघि पुरा गर्छन् ।
फ्लोरिडा स्टेट युनिभिर्सिटीका प्रोफेसर राय बामिस्टर भन्छन् बिहान उठेर जो कोहीले आफ्नो जागिरका अप्ठ्यारा एवं समस्याहरु राम्ररी समाधान गर्न सक्छन् । उनका अनुसार बिहानको समय हाम्रो इच्छाशक्ति अरु बढी हुन्छ । दिनको समयमा यसमा कमी आउँछ ।त्यसैले बिहान चाडै उठेर यो समयको भरपुर फाइदा लिन सकिन्छ ।
फेसबुक बहिष्कार गर्नेमा कोकाकोला थपियो, जुकरबर्गले एक दिनमै गुमाए ७ अर्ब डलर
कोरियामा एकैदिन ४३ सङ्क्रमित
July 8, 2020 Korea pati
फेसबुकले बन्द गर्यो कोरोना भ्याक्सिनको विज्ञापन
October 15, 2020 Korea pati
कोरियामा यो हप्ता बर्षकै अत्यधिक चिसो हुने , स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन सुझाव January 5, 2021